လူမင်းရဲ့ အိမ်တက်မင်္ဂလာကို ဘယ်သူတွေ လာကြသလဲ ? - Myanmarload
လူမင်းရဲ့ အိမ်တက်မင်္ဂလာကို ဘယ်သူတွေ လာကြသလဲ ?
လွန်ခဲ့သော ၉ လ က 21:25 October 12, 2017
လူမင်းကတော့ အိမ်တက်မင်္ဂလာကြွရောက်လာကြတဲ့ ဆရာသမား၊ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၊အနုပညာညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာစီစဉ်ရတာမို့ဖိတ်ကြားဖို့ကျန်ခဲ့ရင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် လို့လည်း သူက ဆိုတာပါ ။
ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အိမ်တက်မင်္ဂလာကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုပါ မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။
ဗေဒါရောင်လေးနဲ့ မခင်စံပါယ်ဦးကတော့ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လှပနေတာပါ ။
အမှတ်တရအဖြစ် မိတ်ကပ်လိမ်းရာမှာလည်း အချိန်မလောက်လို့ မိတ်ကပ်မေဦးက ၁၅ မိနစ်နဲ့ အပြီး ပြင်ပေးခဲ့ရပေမယ့် တကယ့်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေးနဲ့ လှပနေပါတယ် ။ အန်ကယ်လေးလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဦးလူမင်းရဲ့ အိမ်တက်လေးကတော့ စည်စည်ကားကားလေးနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ ။ ရုပ်ရှင်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအတွက်လည်း အလှူငွေလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအလှုလေးကို ဘယ်သူတွေ လာကြပြီး ဘယ်လို ဖက်ရှင်တွေနဲ့ လှနေတယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော် ...
သတင်းအရင်းမြစ် : Lu Min